Kugcotshwe umfundisi omusha ebandleni | News24
Kugcotshwe umfundisi omusha ebandleni
Isithombe: SithunyelweUmfundisi uDumisani Mazeka (kwesokunxele) nowakwakhe uNkk Mazeka kugcotshwa umfunidisi njengomholi omusha webandla.
IBE yimpumelelo inkonzo yokugcotshwa kukababa uDumisani Philip Mazeka webandla le Apostolic Church Zulu Gate in Zion ebi banjelwe ekhaya lakhe emaQongqo ezibhananeni ngeSonto mhlaka 29 Okthoba.
Lenkonzo yokugcotshwa kukababa uMazeka ibingamelwe inhloko yebandla ubab’ u-Archbishop ZP Mkhize kanti ibi hlukaniswe yaba izigaba ezimbili.
Isigaba sokuqala singene ngo 9.30am ekuseni lapho bekwi yinkonzo lapho umholi ebikela umndeni ukuthi indodana yabo namhlanje bazoyigcoba njengo mfundisi, lokhu bakwenze ngenhloso yokuthi ngelinye ilanga kuzoba nomcimbi emndenini angabi khona undodana wabo ngoba eyosebenza umsebenzi we nkonzo, bekhuthazwa ukuthi mabe ngamboni babe nolwazi ukuthi usene sikhundla esimqoka ebandleni.
Umndeni usamkelile isicelo sokuthi kugcotshwe ilunga labo ibesi iqhubeka inkonzo lapho u-Archbishop esevula izwi u-Levitikusi isahluko sesishiyagalombili (8) ivesi lesi-12 elikhuluma ngokugcotshwa kwezi nceku zikaNkulunkulu.
U-Archbishop ubesenza nje ngoba lisho ivesi kanti emva kwalokho ibesiphethwa inkonzo yasendlini kwase kuphunywa sekuye etendeni lapho kuhlangene abazalwane bamahlelo ahlukene, kubese kuvulwa inkonzo yesibili engene ngo-11am ibe isivulwa inkonzo kwabesekuqala isigaba sesibili sokugcotshwa kukababa uMazeka lapho u-Archibishop ubese vula izwi encwadini u-Exodus isahluko 28 ivesi lesithathu (3) okhuluma ngoku mbatha ubese umbathiswa izimbatho zabe undisi.
U-Archbishop ubese elandela ngezwi lika Thimothewu isahluko sesithathu (3) amavesi asuka kwelokuqala (1) kuya kwelesikhombisa (7) lapho izwi elikade likhuluma ngokuthi umfundisi kumele aziphathe kanjani­ mayekulesi khundla nokuthi ikuphi okulindelekile kuyena njengomholi webandla.
U-Archbishop ubese eqhuba ngoku mluleka ngokuzithoba ngoba lendlela inzima ifuna umuntu oqinile ozohlala enkosini.
ngaphambi kokuthi iphethwe inkonzo umfundisi Dumisani Mazeka nomama wakwakhe umaMwelasi Mazeka babe sebexhawulwa ngemali baphiwa nezipho okubalwa ingubo zokulala.